पत्रपत्रिकाबाट— व्यापार गुमाउँदै टेलिकम, नेपाल टेलिकमको बजार हिस्सा क्रमशः कमजोर
Friday October 19, 2018 |
नेपाल टेलिकमले गएको १७ पुसदेखि काठमाडौं उपत्यका र पोखराका केही स्थानमा फोरजी सेवा सुरु गरेको हो । तर , सात महिना बितिसक्दा पनि त्यो सेवा बिस्तार त के काठमाडौं उपत्यकाभित्रै पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन । जबकि, प्रतिस्पर्धी एनसेलले फोरजी सेवा सुरु गरेको तीन महिनामै २४ जिल्लामा विस्तारित भइसकेको छ र ४० जिल्लामा पुर्‍याउने गरी काम भइरहेको छ ।
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको जेठो र एक प्रमुख खेलाडी नेपाल टेलिकम केही वर्षयता ढिलासुस्ती र अकर्मण्यताको सिकार बन्दै गएको उदाहरण हो, यो । यही कारण सरकारलाई सबैभन्दा बढी राजस्व बुझाउने नेपाल टेलिकमको अवस्था क्रमशः कमजोर हुँदै गएको छ । र , यसको प्रत्यक्ष असर बजार र मुनाफामा देखिएको छ ।
टेलिकमको मुख्य आम्दानी भनेको अन्तराष्ट्रिय कल हो । तर, त्यसबाट हुने आम्दानीमा पनि उल्लेख्य गिरावट आएको छ । जस्तो ः बितेको सात महिनामा मात्र टेलिकमको आम्दानी पाँच अर्ब रुपियाँले घटेको छ । मोबाइल सेवाबाट हुने आम्दानीमै गएको तीन महिनामा डेढ अर्ब रुपियाँले कमी आएको छ । यसरी आम्दानी घट्नुको मुख्य कारण नयाँ प्रविधि र सुलभ सेवा दिन नसक्नु नै हो । टेलिकमले सुरु गरेका कतिपय सेवाको बजार विस्तार अत्यन्त सुस्त छ भने कतिचाहिँ क्रमशः खुम्चिँदै गएका छन् । जस्तै ः ०६९ मा बडो धुमाधामसाथ सुरु गरिएको थियो –ब्रोड ब्यान्डमा आधारित इन्टरनेट सेवा, वाई–म्याक्स । तर, पाँच वर्षमा यसका १६ हजार ६ सय ग्राहक मात्र छन् ।
त्यसैगरी तीव्र गतिको इन्टरनेटका लागि उपयोगी फाइवर टू द होम (एफटीटीएच) का प्रयोगकर्ता त ४ सय ९६ मात्र छन् । जबकि, निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुका एफटीटीएचका ग्राहक एक लाख नाघिसकेका छन् । चैतसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वल्र्ड लिंक एउटैको एफटीटीएचका ग्राहक ६८ हजार भन्दा बढी थिए ।
मोबाइल प्रविधिमा भइरहेको गुणात्मक विकासले गर्दा मोबाइलमै इन्टरनेट चलाउने र त्यसमार्फत भ्वाइस सेवासमेत सम्भव भइरहेको छ । टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीहरुका लागि ‘डाटा सर्भिस’ आम्दानीको प्रमुख स्रोत पनि हो । नेपाल टेलिकमका हकमा भने यो उल्टो साबित हुँदै गएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार चैत्र ०७१ मा डाटा—इन्टरनेटमा नेपाल टेलिकमको हिस्सा ५६.७७ प्रतिशत थियो भने चैत्र ०७३ मा त्यो घटेर ५३.७७ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । तर , एनसेलले भने गत वर्ष डाटाबाट हुने आम्दानीमा करिब ७० प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो ।
टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्य भने सार्वजनिक संस्था भएकाले टेन्डर लगायतका काममा सरकारी नियम—कानुनको पालना गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण पनि फोरजीजस्ता सेवा विस्तारमा ढिलाइ भएको र त्यसले आम्दानी घटाइरहेको स्वीकार गर्छिन् ।
टेलिकमको यही अन्योल र ढिलासुस्तीको मौका छोप्दै निजी कम्पनीहरुले फोरजी सेवा विस्तारमा आक्रमक देखिएका छान् । टेलिकम व्यवस्थापनले निजी कम्पनीहरुसँग प्रतिस्पर्धामा जान सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले अवरोध सिर्जना गरेको प्रवक्ता वैद्यले पनि बताइन् ।
मध्यपहाडी लोकमार्गको अप्टिकल फाइबरको काममा भएको ढिलाइका लागि पनि सरकारी कानुनलाई जिम्मेवार ठान्छिन् प्रवक्ता वैद्य । १२ असोज ०७३ मा मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा सँगै जोडिएका जिल्लामा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबीच सम्झौता भएको थियो । तर, अझैसम्म त्यसको ठेक्का निश्चित भएको छैन । ठेक्काको काम अन्तिम चरणमा रहेको वैद्य बताउँछिन् । भन्छिन् “ सरकारी नियम–कानुनको पालना नगरी हुँदैन । योजना राम्रो बनेको खण्डमा मात्र सफल भइन्छ ।”
टेलिकमका उच्च अधिकारीहरु समयमा सेवा विस्तार नहुनुमा सार्वजनिक खरिद ऐन —नियमावली जिम्मेवार रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । तर , यसलाई सरकारी अधिकारीहरु टेलिकम व्यवस्थापनको निरीहता प्रकट गर्ने बहाना मात्र ठान्छन् । हुन पनि नाफामूलक र विशिष्टकृत सेवा दिने संस्थाहरुका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनमा गत माघको तेस्रो साता उक्त ऐनमा भएको संशोधनले सार्वजनिक संस्थाहरुलाई पनि निजी कम्पनीहरुसँग प्रतिस्पर्धामा जान बाटो खोलेको छ । अनुसूचीमा उल्लिखित ती संस्थाहरुमा टेलिकम पनि पर्छ । तर, त्यसतर्फ यसको कुनै सक्रियता छैन ।
नियमावली चाँडो तर्जुमा गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समेत ताकेता गरिएको थियो । तर, टेलिकमको उच्च व्यवस्थापनले त्यसमा खासै चासो नदेखाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव (हाल ः संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय सचिव) दिनेश थपलिया बताउँछन् । उनी आफू सञ्चार मन्त्रालयमा हुँदा नै नियमावलीका लागि काम सुरु गराएको र पछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट थुप्रै पटक ताकेता गरेको बताउँछन् । भन्छन् “आफू अनुकूल नियमावली बनाउन सक्ने व्यवस्था भएर पनि काम नगर्ने अनि दोष मात्र थोपर्ने प्रवृत्ति छ । यदि त्यतिबेलै तातेको भए फागुनमै नियमावली पारित भइसक्थ्यो ।”
टेलिकमका एडीएसएल लगायतका सेवाहरुप्रति सेवाग्राहीको बढ्दो गुनासोले पनि टेलिकमप्रतिको विश्वसनीयता कमजोर बनाउँदै लगेको छ । जसको प्रभावले बजार हिस्सा कमजोर हुँदै गएको छ । ६ साउन ०७४ मा व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल टेलिकमका एडीएसएल लगायतका सेवाहरु गुणस्तरीय नभएको भन्ँदै उच्च व्यवस्थापनको चर्को आलोचना भयो । सेवाग्राहीको गुनासो र चासोप्रति टेलिकम कर्मचारीहरुको रवैया चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै त्यसमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा सांसदहरुको जोड थियो ।
हुन पनि सेवासुधार, गुणस्तरीयता, छरितो प्रक्रिया, नयाँ प्रविधिमा यही अवस्था कायम रहने हो भने निजी दूरसञ्चार कम्पनीहरुले नेपाल टेलिकमको पूरै बजार हिस्सा दयनीय बनाइदिन सक्छन् ।
सेयरमा पनि निराशा
नेपाल टेलिकमप्रतिको आकर्षण सेयर बजारमा समेत छैन । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएदेखि नै टेलिकमप्रति लगानीकर्ताहरुको खासै आकर्षण देखिँंदैन । नेपाली लगानीकर्ताहरुले राइट र बोनस सेयरलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका कारण पनि दोस्रो बजारमा टेलिकमको सेयरको उत्साहजनक कारोबार छैन । बर्सेनि ५० प्रतिशत भन्दा बढीको नगद लाभांश दिइरहेको त छ , टेलिकमले । तर, सार्वजनिक निष्कासन नै प्रिमियम मूल्य (रु ६००) मा भएका कारण प्रतिफलका हिसाबले पनि यसको सेयर त्यति आकर्षक होइन । त्यसमाथि निक्षेपको कमीका कारण कर्जायोग्य रकम अभाव हुन गई बैंकको ब्याजदर नै १४ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको अवस्था छ । पछिल्लो समय खस्कँदो मुनाफा र सेवाले टेलिकमको सेयरप्रतिको आकर्षण थप कमजोर बन्न पुगेको छ । शेयर मूल्यमा उतारचढाव कम हुने गरेका कारण तत्काल मुनाफा खोज्न लगानीकर्ताले टेलिकमको शेयरमा चासो देखाउने गरेका छैनन् । जबकि, नेपालको सेयर बजारमा यस्ता लगानीकर्ताको बर्चस्व रहेको पाइन्छ ।
पुँजी बजारमा टेलिकमप्रति आकर्षण वढ्नका लागि कि त मुनाफा अत्यधिक बढ्नुपर्छ या सेवा विस्तारमा आक्रामकता देखिनुपर्छ । सेयर बजार विश्लेषक प्रकाश तिवारी भन्छन् “अहिलेको अवस्थामा त लगानीकर्ताले चासो देखाउने सम्भावना छैन । त्यसमाथि प्रतिफल खुम्चिँदै गएको छ ” । — सुरेशराज न्यौपानेको विश्लेषण, २०७४ साउन ८—१५ को काठमाडौंबाट प्रकाशित नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिकबाट साभार
टेलिकमको १२५ करोड घोटालामा राजभण्डारी र ठाकुरमाथि कारबाही कहिले ?
बैशाख १७, काठमाडौं । नेपाल टेलिकमलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन सर्घषरत इमानदार कर्मचारीहरुले प्रबन्ध निर्देशक कमिनीराज भण्डारी तथा प्रबन्धक प्रदीप ठाकुरले विभिन्न टेन्डरको सम्झौता एवं प्रोजेक्टहरुमा गरेका अनियमितताबारे सप्रमाण उजुरी दिएर…
पत्रपत्रिकाबाट— नेपाल टेलिकम “भ्रष्ट र दलाल” कै कब्जामा ? भाइलाई कमिसन दिएपछि मात्रै कामिनीले फाइल बढाउने ?
काठमाडौं । भ्रष्ट मानिसले पनि सबैसँग घुस रकम लिदैन । को मार्फत लिने भन्ने उसका आफ्नै विश्वास पात्र दलालहरु हुन्छन् । कांग्रेसका नेता चिरिञ्जीबी वाग्लेले छोरा देबेन्द्र वाग्ले मार्फत रकम…
पत्रपत्रिकाबाट – टेलिकममा खरबौं खरबको चलखेल !
काठमाडौं । विगत कयौं महिनादेखि नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारी र प्रबन्धक प्रदीप ठाकुरले फोरजी सेवा सञ्चालन र अन्य अनेकौं प्रोजेक्ट तथा टेन्डरमा भ्रष्टाचारको ताण्डव मच्चाइरहेको टेलिकम उच्च स्रोतले…
पत्रपत्रिकाबाट— टेलिकमले ग्राहकसँंग निहुँं खोज्यो
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमलाई भ्रष्टाचारले ढाल्नै लाग्दा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सरकारी संयन्त्र कानमा तेल हालेर बसेको समाचार छ । प्राप्त समाचार अनुसार प्रबन्ध निर्देशक कामिनीराज भण्डारी तथा प्रबन्धक प्रदीप…
पत्रपत्रिकाबाट— भ्रष्टाचारले रसातलमा जाँंदै टेलिकम
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरुले फोरजीका नाममा प्रबन्ध निर्देशक कामिनीराज भण्डारी र प्रबन्धक प्रदीप ठाकुरले व्यापक घोटाला गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुका अनुसार यो घोटाला एक सय पच्चीस करोडको…
पत्रपत्रिकाबाट — टेलिकममा खुल्ला भ्रष्टाचार नियमन निकाय मौन
काठमाडौं । टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारी र प्रबन्धक प्रदीप ठाकुरले फोरजी सेवा सञ्चालन र अन्य अनेकौं प्रोजेक्ट तथा टेन्डरमा भ्रष्टाचारको ताण्डव मच्चाइरहेको टेलिकमकै कर्मचारीहरुले आरोप लगाएका छन् । थ्रीजीका…
पत्रपत्रिकाबाट— टेलिकमको फोर जी स्पीड थ्री जी जति पनि नभएको खुलासा
काठमाडौं । टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारी र प्रबन्धक प्रदीप ठाकुरले टेलिकममा अर्बौ रुपैयाँको भ्रष्टाचार गरिरहेको टेलिकमका कर्मचारीले नै आरोप लगाएका छन् । यो रकम टेलिकमका सर्वसाधारण ग्राहकको…
पत्रपत्रिकाबाट —टेलिकमको सिईओ राजभण्डारीको कमाउ धन्दा
नेपाल टेलिकमको प्रथम महिला प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर पनि व्यवसायलाई अघि बढाउनुको साटो कमाउ धन्दामा लागेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कामिनी राजभण्डारीकै कारण नेपाल सरकारको लगानी रहेको नेपाल टेलिकम विस्तारै धरासायी…
पत्रपत्रिकाबाट— टेलिकम कामिनीको दुहुनो गाई
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारी र प्रबन्धक प्रदीप ठाकुरले टेलिकमलाई दुहुनो गाई बनाएका छन् । प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारी र प्रबन्धक ठाकुरले फोरजी सेवा सञ्चालन र अन्य अनेकौं…